Azia Atsimo: Valintenin’ireo fiarahamonina an-tambajotra manoloana ny horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2018 12:30 GMT
Nifarana tamin'ny fampahatsiahivana tena manetriketrika an'ilay faharavana tanteraka mety hateraky ny loza voajanahary ny taona 2004. Namono olona teo amin'ny 275.000 teo ny Tsunami tao amin'ny Ranomasimbe Indiana, ary nandrava hafa maro.
Na dia efa ora maro taorian'ilay loza aza, mbola vaovao kely ihany no hita tao amin'ny Main Stream Media (MSM) – ireo mpampahalala vaovao mahazatra. Nanangana blaogy iray (The Sea Eat Blog) tao amin'ny tranonkala fanaovam-blaogy maimaimpoana ny blaogera sasany, ary nanomboka nanangona vaovao mikasika ilay loza, ny fepetra famonjena sy ireo valintenin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Tamin'ny fotoana iray voafaritra, nanomboka namoaka hafatra tsy nosivanina avy amin'ireo teny amin'ny toerana nisehoan'ilay loza marina ireo blaogy toy ny Chiens Sans Frontiers. Rehefa lasa navesatra be loatra ilay blaogy, natsangana ny wiki iray. Novelomina mpilatsaka an-tsitrapo maro izay nipetraka andro aman'alina mba hanangonana sy hanaparitahana ireo vaovao ilay blaogy sy ilay wiki. Nisintona ny sain'ny MSM nankany amin'ireo blaogera sy ny valintenin'izy ireo manoloana ny loza iray ny ezaka toy ireny. Lesona sarobidy maro no azo ary nozaraina ny fomba fijery maro. Novalian'ireo vondrom-piarahamonina an-tambjotra ireo mikasika ilay Tafiodrivotra Katrina ireo fiarahamonina an-tambajotra, tamin'ny fomba izay mety ho tsy afaka noeritreretina raha tsy nisy ny teknolojia sy ny mpanelanelana izay namela ny olona hiara-hiasa amin'ny tetikasa maro.
Niteraka fanehoankevitra torak'izany ihany koa ilay Horohorontany tao Azia Atsimo. Anisan'ireo blaogy tsara homarihana nandrakotra ilay Horohorontany ny Metroblogging Lahore, Pakistan Earthquake 2005 sy ny South Asia Quake Help. Manana vaovao mikasika ilay loza mahatsiravina, fahafahana mahazo fanampiana, fanomezana ary fikambanana mpitondra fanampiana ireo blaogy ireo. Ho valiny manoloana ireo loza mahatsiravina, tsy hoe fotsiny lasa loharanom-baovao azo atao fanolo, fa koa toerana fifanakalozam-baovao azo itokiana ny tetikasa toy izany.
Tao anatina fanamarihana iray hafa, nandefa antso fangatahana tolo-tànana ireo fikambanana toy ny Federasiona Iraisam-pirenena ho an'ny Vokovoko Mena sy ny Fiarahamonin'ny Volantsinana Mena.